အဆင့် 1: Mastery Practitioner | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
အဆိုပါIAC® Mastery Practitioner
Mastery Practitioner နည်းပြ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်နည်းပြအလုပ်အကိုင်အမှာစကားသောIAC®ရဲ့အမည်တည်း။ ဒါဟာသင်ယူမှုသတ်မှတ်ရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်က9ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝတွေကိုသို့ကဤအဆင့်မြင့်နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ဖို့တဦးတည်းရဲ့ကတိကဝတ်ပြသနေသည်။
ကသင်ယူမှုသတ်မှတ်ရေးအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခြင်း, တစ်ဦးတည်းရပ်နိုင်ပေမယ့်, ကလည်းနည်းပြအဆိုပါ2ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®၏ကြှမျးက application ကိုသရုပ်ပြနှင့် CMC ရရှိထားပြီးဘယ်မှာနည်းပြအောင်လက်မှတ်များ9အဆင့်မှခြေလှမ်းတခုအဖြစ်ကျင်းပရနိုင် (လက်မှတ်ရ Mastery နည်းပြ) သို့မဟုတ် MMC (မာစတာ Mastery နည်းပြ) သတ်မှတ်ရေး။ တစ်ဦးက Mastery Practitioner ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ Mastery သင်ယူ embody လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုနည်းပြအဆိုပါပိတ်ပင်ဝင်ငွေပါဘူး® Mastery Practitioner သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း?
တစ်ဦးဖြည့်စွက် Mastery Professional ဖြံ႕ ျဖိဳးေစေရးအစီအစဥ္မ်ား.
အဆင့် 1 အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးသွားတာရမှတ်အောင်မြင်ရန်။ 70% ၏တစ်ဦးကရမှတ်သွားလိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျကိုလည်းကြိုးစားရန်လိုပေမည် အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း.
Mastery Practitioner "အထုပ်"
သငျသညျသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကတော့ Mastery Practitioner သတ်မှတ်ရေးရရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပိတ်ပင်အမေရိကန် $ 319 ၏အထူးစျေးနှုန်းမှာတစ် Mastery Practitioner အထုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဤသည် Mastery Practitioner အထုပ်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်း အမေရိကန် $ 97 ၏ငွေစု။ ဒါဟာလည်းပါဝင်သည်:
တဦးတည်းတွင်-line ကိုစမ်းသပ်မှု (အမေရိကန် $ 97)
တဦးတည်း Mastery Practitioner ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (MPDP - အမေရိကန် $ 150) နှင့်တစ်ဦးနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအ MPDP ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတူစကားလက်ဆုံ
သငျသညျတခုပိတ်ပင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်, သင်ဆဲ Mastery Practitioner အထုပ်ဝယ်နိုင်နှင့်သင့်ပိတ်ပင်အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းကိုပိုပြီးတနှစ်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျပိတ်ပင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ကြောင်းသင့်အီးမေးလ်အိုင်ဒီနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်ကိုဝယ်ကြောင်းသေချာစေရန် ကျေးဇူးပြု..
MP ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ယခု၀ယ္ယူပါ။